Ukukhulisa iindevu kuhlala kuyinto yefashoni, zeziphi iintlobo zeendevu ozithandayo? | Amadoda aQinisekileyo
UPaco Maria Garcia | | Chetyiwe
Zihambile iintsuku apho amadoda bekufuneka enxibe ubuso obuchetyiwe ngokupheleleyo ukuthathwa njengococekileyo kwaye uhlonipheke.
Ukukhulisa iindevu kusefashonini. Kodwa ayisiyokulinda ukuba ikhule kwaye ngoku. Ifuna ukunakekelwa nokhathalelo (kakhulu okanye ngaphezulu njengokucheba ntsasa nganye). Kwakhona, kukho iintlobo ezahlukeneyo zezitayile kunye neendlela zokuyinxiba, eyahluka ngokwendawo ezibonakalayo zomntu ngamnye. Zingaphi iindidi zeendevu ezikhoyo?
1 Zeziphi kwezi ntlobo zeendevu ziyakuqinisekisayo?
1.1 Iindevu ezipheleleyo
1.3 Van dicke
Zeziphi kwezi ntlobo zeendevu ziyakuqinisekisayo?
Ukuba ungomnye wabo baneenwele zobuso ezininzi, le ndlela ihamba nawe. Ekuqaleni, kufuneka uyivumele ikhule. Phantse dEmva kweeveki ezintandathu, kufuneka uqale uyicacise ngoncedo lwesikere, ukuze ibenendlela kunye nocwangco. Khumbula ukuba ayisiyiyo nje ngokuba nobuso obugcweleyo. Kukwacetyiswa nayo Rhoqo sebenzisa ishampu yeendevu. Amadoda anempandla okanye achetyiweyo enza kakuhle kakhulu. Unokunxiba kunye okanye ngaphandle kwamadevu.
Uhlobo lweklasikhi phakathi kweentlobo zeendevu, ezahluka-hlukeneyo. Ngokusisiseko, imalunga nokuvumela iinwele zikhule esilevini kwaye uzimanye nazo (okanye hayi) ngamadevu. Isebenza kwabo bakhulisa iindevu ngendlela eninzi, kunye nakwabo bangenayo. Inkqubo ye- iqhina lingavalwaOko kukuthi, iinwele eziphakama esilevini zidibanisa iziphelo zamadevu. Kukho isitayile "esivulekileyo".
Le sampulu phakathi kweentlobo ze Iindevu zinegama lazo kwinkulungwane ye-XNUMX yomzobi waseDatshi u-Anthony Van Dick. Yinto eyahlukileyo kwiGoatee enesimbo seMadevu. Indawo ephantsi kwemilebe ichaziwe Imilo yeT eguqulweyo, ishiya indawo yesilevu inabantu abaninzi. Iindevu zinqunyulwa ukusikwa. Ukukhetha le ndlela, kuyacetyiswa ukuba uhambe ngeendevu ezipheleleyo kuqala emva koko, xa zide ngokwaneleyo, zichebe izidlele, ukurhawuzelela amacala, imihlathi kunye nendawo yentamo.
Yiyo iindevu ezahlukileyo ukuba amadevu. Imalunga nokukhula komgca ocolekileyo ukusuka kwiintlungu ezisemacaleni kunye nokuyibeka esilevini. Obunye ubuso nentamo kufuneka buhlale buchetyiwe. Ilungele abo bangenazo iinwele zobuso ezingqindilili.
Imithombo yemifanekiso: Imagazini yeNupcias / Estarguapas
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Chetyiwe » Iindidi zeendevu
Ukuthengiswa kwehlobo: Izizathu zokuTyala imali kwiibhatyi ezisisiseko
Abaqulunqi bayakuvuma ukuphuma kweeflip-flops esitratweni